Ubuntu ဆိုတာဘာလဲ - MYSTERY ZILLION
December 2007 edited January 2008 in Ubuntu
ဒီနေ့ကိုစေတန်ရဲ့ဘလော့မှာ ၀င်မွှေကြည့်လိုက်တော့ ကိုစေတန်က Ubuntu ကိုအရမ်းပဲသဘောကျတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်. ဒါနဲ့ Ubuntu ဆိုတာဘာလဲသိချင်လို့ Wiki မှာ check ကြည့်လိုက်တော့ အင်္ဂလိပ်စာချို့တဲ့ကျနော်မှာ ဘာမှသေသေချာချာ၊ ရေရေရာရာ မသိလိုက်ရပဲ..အလွန်အဖိုးတန်တဲ့ အချိန်တွေကုန်ခဲ့ရတယ်...MZ မှာUbuntu ဆိုတဲ့ Keyword နဲ့ရှာကြည့်လိုက်တော့လည်း များများ စားစားရေးထားတာ မတွေ့သေးဘူးဗျ.......
ပညာပါရမီဖြည့်ပေးသော ရောင်းရင်းများခင်ဗျာ...Ubuntu (Ubuntu နဲ့ နာမည်တူ Kubuntu လေးကိုပါဖြစ်နိုင်ရင်..) ဆိုတာလေးကို အကျယ်တ၀င့်ရှင်းပြ ပေးစေလိုပါတယ်....ဆွေးနွေးစေလိုပါတယ်....
Ubuntu is Affrican word which means "Huminity to others".
I don't recall exactly but I think that what it means.
I also check that in dictionaries but can't find.
I found that on Ubuntu web page.
Please,check that Ubuntu offical site.
Ubuntu 7.10 is available at CD shops.
ကောင်းဗျာ...mysteryzillion.com/wiki ကိုမေ့နေတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..Ubuntu နဲ့ ကွန်ပျူတာကို ကလိလိုက်အုံးမယ်...
မေးချင်တာက ခေါင်းစဉ်နဲ့ တော့ မဆိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘယ်မှာ ရေးရမှန်းမသိလို့ ရောက်နေတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ မေးလိုက်ရတာ တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်တော် က လင်းနစ်ကို အခုမှ စသုံးမှာပါ။ ဒီမှာ ရေးထားတာတွေ ဖတ်ပြီးတော့ အူဘန်တူ အကြောင်းတော့ ရိုးတိုးရိပ်တိတ် သိပါပြီ။ အူဘန်တူ တင်မယ်လို့ စဉ်းစားပြီးမှ လင်းနစ်နဲ့ အကျွမ်းတ၀င်ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို မေးကြည့်တော့ သူက SUSE ကပိုမိုက်တယ်။ SUSE တင်ပါလားလို့ပြောတော့ နည်းနည်းတွေေ၀သွားတယ်။ အဲဒါနဲ့ mysteryzillion.com/wiki မှာSUSE အကြောင်းရှာကြည့်တော့ ရေးထားတာ မတွေ့သေးဘူး။ အဲဒါ ကို အဒ်မင် တို့သိရင် နည်းနည်းပြောပြကြပါအုံးဗျာ။ ကျေးဇူးတင်လျက်.. း)